Tsvaga izvo zvatingaone muScotland guta reGlasgow | Bezzia
Chii chekuona muGlasgow
Susana Garcia | 21/04/2021 10:00 | Lifestyle, famba
La guta reGlasgow iguta rechiteshi riri padivi peRwizi Clyde. Iri guta reScotland muLowlands haisi kazhinji nzvimbo yekushanyira kana ichienzaniswa neElinburgh, asi zvakare inovanza zvimwe zvinonakidza zvinhu. Kubva XNUMXth kusvika XNUMXth century yaive guta rakabudirira uye rine maindasitiri, saka raive nekukura kukuru. Nhasi tichiri kugona kuona hweVictorian neGeorgia, pamwe nenzvimbo dzemazuva ano.
Ngatione kuti ndezvipi nzvimbo dzekufarira muguta reGlasgow, kunovawo kushanya kunonakidza. Iko kushanya kukuru kana isu tiri muElinburgh, sezvo inosvika nguva isati yasvika. Tichakwanisa kuona yayo yepakati nzvimbo uye yakagadziridzwa chiteshi nzvimbo padyo nerwizi, kuwedzera kune zvimwe zvinhu.
1 Cathedral yeSt Mungo
3 Glasgow Botanic Bindu
4 Necropolis muGlasgow
5 Ashton uye Yakavanzwa Lane
6 Glasgow pakati peguta
Cathedral yeSt Mungo
Uyu Cathedral ndechimwe chezvivakwa zvekare uye inomiririra yeiyo Gothic maitiro muScotland. Iyo kereke huru iyo yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX uye iyo yakagadziridzwa muzana ramakore rechigumi nemashanu. Unogona kushanyira guva raSaint Mungo anova iye musande weguta uye iri mune yekare crypt kubva muzana ramakore regumi nematatu. Iwe unogona zvakare kukoshesa yakanaka yakasviba magirazi mahwindo, kunyangwe aripo, uye siringi kubva muzana ramakore regumi neshanu. Kereke yakanaka kwazvo uye kumwe kwekushanya kwakakosha muguta reGlasgow.
Muguta rino mune mamuseum mazhinji, kunyangwe iyi ndiyo yaunofanira kuona uye usarasikirwe kana iwe usina nguva yakawanda yekuzviona zvese. Iyi miziyamu yakakomberedzwa nemagadheni akanaka uye kwete chete inokwezva nharaunda dzayo, sezvo iine mabasa mazhinji emafaro. Tinogona kuona mumakamuri avo Boticelli's 'Iyo Annunciation' kana Dalí's 'Kristu waSanta Johane weMuchinjikwa', pamwe nemimwe mifananidzo yaVan Gogh kana Rembrandt.
Glasgow Botanic Bindu
Izvi zvakanaka Bindu reBotanical rinowanikwa kune mumwe mugumo weWest End. Iyo paki hombe yeruzhinji iyo yakanaka kwazvo mumwaka senge chirimo uye matsutso. Mubindu iri tinowana iyo Kibble Palace, hofori yeVictorian greenhouse iyo yakakodzera kushanyirwa. Nzvimbo yakakwana yekutora mifananidzo yakanaka.
Pedyo neSt Mungo's Cathedral kune yakanaka Glasgow necropolis. MuElinburgh unogona zvakare kukoshesa marinda akare ekare, ane hunyanzvi hwakakosha. Makuva aya anobva kunguva yaVictorian, saka ane zvakawanda zvinozotisiya tichishamisika. Unogona kutora kufamba uchiyemura zvese zviri kumakuva uye zvakare kukwira kuchedral kuti uone kubva kumusoro.
Ashton uye Yakavanzwa Lane
Kana iwe uchinzwa chero chinhu pamusoro pemigwagwa, iwo akatetepa, ekare uye macobbled alleys kwaunogona kuwana yakanakisa mamiriro mukati meguta. Saka kumwe kushanya ikoko iwe zvechokwadi uchada kuita inosanganisira Ashton uye Hidden Lane. Ashton iri mudunhu reyunivhesiti uye isu tinogona kuwana mabhawa nemaresitorendi ane yakanaka mamiriro ekumira. Chakavanzika chakanyarara, chine maresitorendi uye zvimwe zvitoro maunotenga chimwe chinhu chinonakidza.
Glasgow pakati peguta
Pakati peguta tinogona kuona dzimwe nzvimbo dzinonakidza, nekuti iguta kwatinowana hunyanzvi uye maficha akanaka. George Square inzvimbo yepakati chaizvo ine chiyeuchidzo chehondo. MuBuchanan Street tinowana mugwagwa unonyanya kutengeswa kubva kuguta, nedzimwe nzira dzinonakidza kana nzira uye kuratidzwa kwounyanzvi hwedhorobha. Tinogona zvakare kushanyira Iyo Lighthouse, chivakwa chinoshamisa kwazvo muMackintosh iyo yaive dzimbahwe repepanhau asi ikozvino yamu Museum ine rubvumo rwemahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Chii chekuona muGlasgow
Mifananidzo yemuchato, sei kugara uchitaridzika zvakanaka?
Chii chinonzi fenugreek uye chii chinoshandiswa?